Minbarka Mubarak Pic 2018 Images Iyadoo New Collection - minbarka Mubarak 2018 : muhiimadda, laba, Barako, ः ades, iyo Quran
admin April 19, 2018 minbarka Mubarak PIC No Comments
Hello xubnaha qaaliga ah
Alhamduillah kale jummah sayidkiisa oo dhan maalmood yimid again.and aan mar kale in aad la leh minbarka Mubarak PIC
Gacaliye Eebe. Waan ku baryayaaye, in ku alla kii oo akhrisanaya this post yeelan doonaan gargaarkiinna,farxad,nabadda,jeclahay,iyo guidance.I laga yaabaa inaadan ogayn dhibaatooyinkoodii,laakiin inaad dhawrtaan do.please noo ilaalinta.“Ameen”.
halkan timid maalintii oo barakeysan iyo sawab dheeraad ah waa abaalmarinta by Eebe.
u badan tahay in aan helno abaalmarinta dheeraad ah oo cibaadada si ay u Qaadirka Eebe On day.we qaali yihiin kuwa raaca diinta ah in reebi quusan.
Annagu waxaannu nahay Umadda Nebi a in rajadii marnaba lagama badin mustaqbalka aan loo eegin xaaladaha.
“Rasulallah S.A.W ayaa sheegay in: “maalinta ugu wanaagsan ee toddobaadka in qorraxdu soo baxdo on,waa maalintii jum'ah.”
“Habeenka of jum'ah “Habeenka dhaxaysay Khamiistii iyo Jimcihii”waa ka badan barakaysan iyo maalinta jum'ah waa barakaysan,.
isagoo muslim ah waxaa ku cadaalo badan socday masjidka “Ilaah”doonayo inaad fiiro ma ahan oo keliya in aad imaanshaha.
2018 Minbarka Mubarak PIC
Minbarka Mubarak Pic Collection
Hd minbarka Mubarak Pic
New Pic minbarka Mubarak
maanta Alhamdolillah waa jum'ah
Aynu ka dhigi Dua for All Umadda Muslimka ah
oo dhan aan qoyska iyo saaxiibada
Waxaan rajaynayaa in aad yeelan doontaa weyn a
Eebe aqbalo du'as inaad maalinta this barakaysan Ameen
Almight Gacaliye! noo kaxayn jidka saxda ah!
Ya Allah ii soo toosi
ka hor i marna toos
” Marna lumiso rajada iyo isku halleeya xoogga Dua,
Wuxuu Eebe idin siin doonaa wax walba oo aad rabto in aad ilaa iyo inta waxa kuu fiican”
leeyihiin Insha alah ah isbuucaan weyn.
Idinkuna ahaada sida ubaxa
in siinayaa caraftiisu in xataa gacanta
2018 PIC minbarka Mubarak
Tukada waa sarrifka la yaab leh, aad wareejinta welwelkaaga Eebe iyo “Ilaah” handsover barakeysan inuu idin kaliya Salaadda minbarka Mubarak.